Tsidiho ny Lake Titicaca, manontany tena any Peroa | Vaovao momba ny dia
Tsidiho ny Lake Titicaca, manontany tena any Peroa
Mariela Carril | | Peru, Inona no ho hita
Fa maninona ny Farihy Tititica? Satria io no farihy avo indrindra azo zahana eto amin'izao tontolo izao ary satria efa niorina tamin'ny kolontsaina teo an-toerana nandritra ny an'arivony taona maro. Iray amin'ireo toerana manintona mpizahatany Peroviana malaza indrindra eto amin'izao tontolo izao ary raha mandeha mitsangatsangana ianao dia tsy azonao odian-tsy hita.
Ity fitaratra rano tsara ity dia zarain'i Peru sy Bolivia ary anisan'ny karatra paositry ny paositra malaza indrindra ny an'ny sambo vazimba teratany izay niasa izany nandritra ny taonjato maro. Manasa anao hahalala izany izahay ka eto izahay dia mamela anao fampahalalana azo ampiharina manao azy
2 Tsidiho ny Lake Titicaca
Manana ampahany lehibe kokoa amin'ilay farihy i Peroa noho i Bolivia mpifanolo-bodirindrina aminy. Ny halalin'io farihy io dia mihoatra ny 100 metatra na dia mahatratra 300 eo ho eo amin'ny toerana lalina indrindra. Raha ny marina dia karazan-drano roa izay misy ny tantsambo iray, ny Havoana Tiquina, an'ny 780 metatra, izay ampitan'ny sambo. Ny rano dia manana mari-pana 13ºC eo ho eo ka mangatsiatsiaka izy ireo ary miova be amin'ny vanim-potoana amin'ny taona. Raha mandeha amin'ny fahavaratra ianao dia ho afaka hahita maso tafio-drivotra tezitra manetsiketsika ny tampony, ohatra.
Izy io dia farihy iray izay very rano 90% noho ny etona, noho izany dia tena kely dia kely ny riaka ao anaty renirano. Rano somary masira izy ireo ary tena kristaly na dia tato anatin'ny taona vitsivitsy aza dia tsy nisy ny tsy fahampian'ny faritra voaloton'ny olona. Mazava ho manana morontsiraka sy nosy maro izy io, voajanahary sy artifisialy. Ireo nosy artifisialy dia kilasika taloha amin'ny farihy ary vita amin'ny bararata.
Momba izany ny nosin'ny uros, vondrona ara-poko iray izay miaina amin'ny jono sy fihazana ary efa an-jato taona no nanangana nosy mitsingevana miaraka amin'ny cattails. Ireo nosy tany am-boalohany dia teo amin'ny lafiny peroviana hatrany ary hatrany amin'ny firoboroboan'ny mpizahatany tao anatin'ny taona vitsivitsy dia naorina teo amin'ny lafiny Boliviana koa izy ireo. Mandehandeha ao a "Caballito de totora"Araka ny nolazain'izy ireo tamin'ny sambon'ny Uros, zavatra azonao atao sy tokony hatao izany.
Tsidiho ny Lake Titicaca
Ny farihy dia azo zahana amin'ny faritany isan-karazany, valo ny totaliny ary ao avokoa no misy Faritra Puno. Puno, avy eo, dia toerana fizahan-tany mahafinaritra ary iray amin'ireo toerana mahaliana indrindra any Amerika atsimo.
Ny Espaniola dia nanangana ny tanànan'i Puno tamin'ny 1668 ka toerana tsara hijerena ireo kolontsaina mitsonika vokariny. Azonao atao hiaraka amin'i Lima miaraka amin'i Puno amin'ny fiaramanidina, misy seranam-piara-manidina any Juliaca izay antsasak'adiny monja miala an'i Puno, na amin'ny bus fitateram-bahoaka na tsy miankina. Amin'ny bus fitateram-bahoaka ny dia dia sahabo ho 18 ora tsy misy fijanonana mpanelanelana sy ny serivisy tsy miankina, misy ny Peru Hop, miendrika ambony sy midina izy io ary mijanona amin'ny lalana manontolo.
Folo monja avy eo amin'ny kianjan'i Puno no farihy goavambe ary eo no ahitanao ireo uros mamolavola ny sambo bararata na manofa mitaingina sambo. Mila manakaiky fotsiny ianao hanakatona ny fifanarahana, noho izany dia tena tsotra. Ny dia mankany amin'ireo nosy mitsingevana dia maharitra adiny roa. Azonao atao ihany koa ny manakarama ny fitsangatsanganana any amin'ny hotely na amin'ny masoivoho fa azo antoka fa ho lafo kely kokoa izany.
Azo antoka fa ny fiantohana dia misy ny fitaterana mankany amin'ny moron'ny farihy. Raha mila traikefa mandeha lavitra ianao dia afaka miala amin'ireo Nosy mitsingevana ary mitodi-doha mankany Nosy Taquille, izay misy olona manodidina ny roa arivo izay miteny Quechua, ny fiteny eo an-toerana. Ny fitsidihana tanteraka dia natatra ara-potoana satria ao Taquile dia afaka mitsidika ny kianja miaraka amin'ny tsenany ianao, miantsena kely ary mihinana zavatra. Omeo adiny enina eo ho eo ny totaliny ao anatin'izany ny dia an-tsambo.
Safidy hafa izany mandany alina ao amin'ny Nosy Amantani na manao taranja kayak. Ireo dian-tongotra ireo dia fantatra amin'ny anarana hoe Titikayak ary atolotra manokana any Llachón izy ireo. Amantaní dia mpifanila vodirindrina amin'i Taquile saingy tsy dia matetika izy io. Manodidina ny efatra arivo ny olona monina eto amin'ny fiarahamonina fambolena. Misy rava arkeolojika navelan'ny mistery Kolontsaina Tiahuanaco ary fomba fijery voajanahary tena tsara. Raha arkeolojia sy ny mistery anao ny anao, izay be dia be eto, dia azonao atao koa ny mahafantatra ilay Fasana sillustani talohan'ny Inca, eo amoron'ny Farihy Umayo, akaikin'i Puno.
Ireo fasana dia natsangana tamin'ny endrika tilikambo, nantsoina izy ireo chullipas, ary an'ny kolontsaina Qulla resin'ny Incas tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Na dia hita manerana ny altiplano aza ireo firafitra ireo sy ny hafa amin'ny kolontsaina mitovy, ireo, an'ny SillustaniIzy ireo no voatahiry tsara indrindra. Toy ny 90 amin'ireo chullpas na tranon'ny maty ireo ary ho hitanao fa namboarina tamin'ny vato volkano nalaina avy amin'ny toeram-piarovana teo akaiky teo izy ireo.
Mifanohitra amin'izany, tianao ve ny natiora? Avy eo ianao dia afaka mahita izany ao amin'ny Tahirimbolam-pirenena Lake Titicaca. Manana sehatra roa izy io, ny iray dia ao amin'ny Bay of Puno ary miaro ny bararata izay tena ilaina amin'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana ary ny iray kosa any amin'ny faritr'i Huancané, somary tsy dia be mpitsidika nefa manan-karena amin'ny karazany ary tena mahaliana. Ireto misy sasany Karazam-borona 600, trondro teratany 14 ary karazana amphibia 18.
Ny marina dia ity toerana ity no mendrika hitsidihana lava kokoa noho ny mahazatra, noho izany dia tsara ny mijanona mandritra ny andro vitsivitsy ary avelao ny tenanao hilentika ny kolontsaina sy ny fahatsapana eo an-toerana. Azonao atao ny mijanona an-tanety na matory any Taquille na Amantaní, ohatra. Ary raha mitady zavatra tony ianao dia misy ny Nosy Anapia, iray amin'ireo nosy dimy izay ao amin'ny faritry ny Farihy Winaymarka, akaiky indrindra an'i Bolivia. Ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana dia mitantana programa fizahan-tany izay ahitana trano, sakafo ary hetsika.
Tsy mpizahatany ve ianao miaraka amin'ny valizy fa manana valizy sy fandroana feno? Avy eo ianao dia afaka mandoa ny fitsidihana ny Nosy Suasi izay Nosy tokana tsy miankina amin'ny Farihy Titicaca. Indro Ilay izy Trano Andean, hotely ekolojika manome traikefa ananan'ny rehetra amin'ny filalaovana madio: sakafo gourmet, sauna, kayak, fitsangatsangana. Ity nosy ity dia avaratry ny farihy eo amin'ny adiny efatra eo ho eo miala an'i Puno ka hatrany Juliaca ao anatin'ny sambon'ny farihy. Mijanona any amin'ireo nosy mitsinkafona ao Uros sy Tauqille ity sambo ity mba hitsidihanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Peru » Tsidiho ny Lake Titicaca, manontany tena any Peroa
Ahoana ny fomba handaminana sy hankafizana fitsangatsangana fiara
Inona no ho hita any amin'ny nosy Kreta